Unite Top အကြောင်း
ဒေါင်လိုက် သတ္တုမဟုတ်သော ဖဲချပ်
မိကျောင်း သတ္တု ဖြတ်တောက်ခြင်း။
သတ္တု baler ညှပ်
Bale breaker စက်
Q43 စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် မိကျောင်း မိကျောင်း ညှပ် ပါရှိပါတယ်။
admin မှ 22-03-11 ရက်နေ့တွင်
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ- 1. Alligator ရိတ်သိမ်းစက်သည် ဟိုက်ဒရောလစ်ဒရိုက်ကို အသုံးပြု၍ လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။2. Alligator shear machine's working blade length: 400mm, 600mm, 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, shear force 63 တန်မှ 400 တန်အထိ 8 အဆင့်။ဟိုက်ဒရောလစ်ဖြတ်စက်...
Y81-2500 ဟိုက်ဒရောလစ် အပိုင်းအစ သတ္တု ချိန်ညှိစက်အတွက် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် ပြဿနာကို အစောပိုင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း။
admin မှ 22-02-24 ရက်နေ့တွင်
ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ဆစ်သတ္တု baler ၏ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် မအောင်မြင်မီ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အနည်းငယ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဖြစ်စဉ်အချို့ ရှိလိမ့်မည်၊ လေ့လာမှုကို အာရုံစိုက်ထားသရွေ့ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်၊ ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရန်အတွက် အချို့သော ချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ...
Y81 စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တု baling press baler ၏ဆီညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်
admin မှ 22-01-11 ရက်နေ့တွင်
သတ္တု baling press baler ၏ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ ညစ်ညမ်းမှုသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ ကိုယ်တိုင်က အဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်နေသောကြောင့် ညစ်ညမ်းမှုကို လုံးလုံးလျားလျား တားဆီးရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ဟိုက်ဒရောလစ် အစိတ်အပိုင်းများ ၏ ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်းကို တာရှည်ခံစေရန်အတွက် ...
Y81 အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တုဗလာစက်အတွက် ယိုစိမ့်မှုဖြေရှင်းချက် ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်
1. ရွေ့လျားနေသော ဖျံများ၏ ဝတ်ဆင်မှုကို လျှော့ချပါ။ရွေ့လျားနေသော ဖျံအများစုကို တိကျစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ရွေ့လျားတံဆိပ်ကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော၊ မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အသုံးပြုပါက၊ ၎င်းသည် ယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဒီဇိုင်းရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင် ဒီဇိုင်နာတွေက ဒီဇိုင်နာတွေကို လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်တယ်...
Y81 ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ဆစ်သတ္တု baler ၏လုပ်ဆောင်မှုစနစ်တွင် ဆီအပူချိန်လွှမ်းမိုးမှု
1. ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တု baler ၏အလုပ်လုပ်သောစနစ်အတွက်မြင့်မားသောဆီအပူချိန်ကိုထိခိုက်စေသည်။မြင့်မားသောဆီအပူချိန်သည် ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တု baler ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာစနစ်ရှိ ရော်ဘာအလုံပိတ်များနှင့် ရေပိုက်များ အိုမင်းခြင်း သို့မဟုတ် ယိုယွင်းလာမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပြီး ၎င်းတို့၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းများကို ဆုံးရှုံးစေသည်...
Y81 စီးရီး သတ္တုကြိတ်စက် မိတ်ဆက်ခြင်း။
21-10-18 ရက်နေ့တွင် admin မှ
စျေးကွက်တွင် စွန့်ပစ်သတ္တု ဖဲချပ်များ၏ အဓိက အမျိုးအစားကား အဘယ်နည်း။ယေဘူယျအားဖြင့် ဒေါင်လိုက် လက်စွဲ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အလျားလိုက် လက်စွဲစာအုပ်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အလျားလိုက် အလိုအလျောက် ထုပ်ပိုးခြင်း ဟူ၍ သုံးမျိုးရှိသည်။ထုပ်ပိုးခြင်းဌာနတွင် စွန့်ပစ်သတ္တုကြိတ်စက်ကို မည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း။ကိုယ်ပိုင်အသံအတိုးအကျယ်ကို ဆိုလိုတာပါ..။
21-09-13 ရက်နေ့တွင် admin မှ
အကန့်အသတ်နှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သော တွင်းထွက်သယံဇာတများကြောင့် လူသားများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါ သယံဇာတများ အဆက်မပြတ် လျော့နည်းလာကာ သယံဇာတပြတ်လပ်မှုသည် လူသားများ တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်ရမည့် အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။အဟောင်းနဲ့ အသစ် အစားထိုးတဲ့ ဖြစ်စဉ်...
Y81 ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တုဗလာစက် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အမှားရှာခြင်း
စက်သည် အလုပ်လုပ်သောအခါ သိသာထင်ရှားသောတုန်ခါမှု မရှိသောကြောင့် ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် အထူးလိုအပ်ချက်မရှိပါ။အသုံးပြုသူများသည် သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေအရ စက်ကို အိမ်တွင်း၌ထားနိုင်ပြီး သာမန်ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းကို လောင်းနိုင်သည်။installation sequence တွင် host ကို firs ထားရှိသင့်သည်...
ဟိုက်ဒရောလစ် သတ္တု အပိုင်းအစများ ညှပ်စက် ချို့ယွင်းချက် ဖြေရှင်းခြင်း။
ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ဆစ်သတ္တု baler ၏ပြိုကွဲခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။ချို့ယွင်းချက်၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကြောင်းရင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အမှား၏ နောက်ဆုံးအကြောင်းရင်းကို ရှာမတွေ့မချင်း အကြောင်းရင်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖယ်ရှားပါ။စိစစ်နိုင်ပါတယ်...
Q91Y စီးရီးအကြီးစားဂျူတီ gantry ညှပ်စက်၏နည်းပညာမိတ်ဆက်
21-07-08 တွင် admin မှ
Q91Y စီးရီးအကြီးစား gantry ရိတ်သိမ်းစက်သည် လေးလံသော အပိုင်းအစများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော စက်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ Q91Y စီးရီးအကြီးစားတာဝန်ယူထားသော gantry ညှပ်စက်သည် ပါးလွှာသောသံမဏိ၊ သံမဏိဘား၊ သံမဏိပြား၊ နီကယ်ပြား၊ သံမဏိ၊ သံမဏိအဝိုင်း၊ သံမဏိပိုက်၊ တွဲဖက်အတွက် သင့်လျော်သည်။
Y81-2500 သတ္တုထုပ်ပိုးခြင်း ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်စက်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
21-06-28 ရက်နေ့တွင် admin မှ
JIANGYIN Unite ထိပ်တန်းအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ယန္တရား Y81-2500 သတ္တုထုပ်ပိုးထားသော ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်စက်သည် သံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာရေပန်းစားပြီး တန်ဖိုးရှိသည့် ဟိုက်ဒရောလစ်ကိရိယာများဖြင့် သတ္တုအညစ်အကြေးများကို ပုံသွင်းခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။
သတ္တု ဖဲချပ်၏ အားသာချက် နှင့် အသုံးပြုမှု
သတ္တု အပိုင်းအစ အမျိုးမျိုးရှိပြီး အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရှိကာ ကောင်းသည် ဆိုးသည် ဟူသည်မှာ သိုလှောင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် သံမဏိစက်၏ မီးဖိုထဲသို့ သွင်းရာတွင် ကြီးမားသော ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် သတ္တုအညစ်အကြေးများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းထားခြင်းကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု အနည်းငယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရေရှည်တွင်...
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းကွန်ရက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကို ဆက်သွယ်ပါ။
အိမ်လုပ်ကတ်ထူပြားဖဲချပ်, Pop-Top Can Baler ကိရိယာ, အလူမီနီယံ သတ္တုပြား ညှပ်စက်, အပိုင်းအစ သတ္တုကြိတ်စက်, Leaf Compactor နှင့် Baler, Y81 ဟိုက်ဒရောလစ် Baler,